Ties mifono Manufacturers sy Suppliers | Shina mifono Ties Factory
Mifono tie no karazana preformed tie fizarana roa na helical kambana fifandraisana izay nanjary mpitarika mba hahazoana an-tampon'ny na ny lafiny Groove ny bakoly insulator.
Mifono plastika no nampiasaina lafiny tie ho an'ny mpitarika ny nafatotra ho amboarany avy eny ambony mitafo in MV sy HV herinaratra fizarana tambajotra.
Rakotra plastika preformed fifandraisana matetika ampiharina tsiroaroa, ary nametraka ao mifanohitra amin'izy samy izy. Azo ampiasaina araka ny tampony sy ny lafiny roa amin'ny insulator fifandraisana.
Preformed insulator tie atao mafana mandroboka hery avo nandrisika vy, tanteraka miafina ao amin'ny polymer, izay manodidina ny mangadihady vy tariby ny tie, ka mifindra izany. Izay manome Nihazonako ambony sy ny herinaratra fampisehoana amin'ny tsara indrindra insulation toetra ny fizarana ampiharina.
Ny tsara haben'ny lafiny helical tie dia mora ny manaiky ny loko fehezan-dalàna.
Jera namorona ny tariby lafiny fifandraisana tena manome antoka ny fiarovana ny tariby nandritra ny fahita indrindra karazana sarimihetsika: hovitrovitra, galloping rehefa nametraka ny lahatsoratra insulator karazana.
Ny manam-paharoa, ny iray-tapa famolavolana tsy misy horonan-adin-tsaina, na avo mitazona fitaovana manome antoka amin'ny fametrahana mora ela velona nandritra ny preformed mifono insulator fifandraisana.
Jera dia afaka ny hanana preformed tariby misaintsaina sy preformed lafiny fifandraisana araka ny tariby famaritana, insulator vozony sy ny savaivony lavitra eo amin'ny tsato-kazo.
Isika mifantoka amin'ny toetra sy ny vita vahaolana ho an'ny mpanjifa.
Tonga soa eto amin'ny hifandray antsika!
Mifono tie CO35 (35-50)
Mifono tie CO70 (70-95)
Mifono tie CO120 (120-150)